Ingcwele yeRosari ngolwesiThathu Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Kukho indlela eyahlukileyo yokuthandaza irosari, oku kuyakuxhomekeka kumhla ohambelana. Ngesi sihlandlo, siza kuthetha nge Ingcwele yeRosari NgoLwesithathu, ukuze ufunde ukuthandaza ngokuchanekileyo, sicebisa ukuba ungayeki ukusifunda.
1 Iimfihlakalo zeRosari eNgcwele ngoLwesithathu
2 Iimfihlakalo eziZukileyo zeRosari eNgcwele
2.1.1 Imfihlelo yokuqala ezukileyo: Uvuko lukaYesu
2.1.2 Imfihlelo yesiBini ezukileyo: Ukunyuka kukaYesu ezulwini
2.1.3 Imfihlakalo yesithathu ezukileyo: Ukufika koMoya oyiNgcwele
2.1.4 Imfihlakalo yesine ezukileyo: Ukunyuswa kweNtombikazi enguMariya ezulwini
2.1.5 Imfihlakalo yesihlanu ezukileyo: Intombikazi enguMariya isithsaba ukumkanikazi kwindalo yonke
2.1.6 Imithandazo yokufikelela kuvuthondaba
3 Kukuthini ukusetyenziswa kokuthandaza kwiRosari?
4 Kutheni ndifanele ndithandaze iRosari?
Iimfihlakalo zeRosari eNgcwele ngoLwesithathu
Usuku ngalunye lunemfihlakalo ehambelana nalo, olu luhlu kunye namanqanaba amanyathelo asekiwe yiCawa yamaKatolika, ngokudibana noPapa, kwizigidi zeminyaka eyadlulayo. Iimfihlakalo ezikhoyo ngoku zezi zilandelayo:
Iimfihlakalo ezivuyayo zihambelana neMvulo nangoMgqibelo, abaLusizi ukuya kuLwezibini, abaDunyisiweyo ukuya kooLwezithathu nangooCawe, ekugqibeleni abaKhanyayo ukuya ngoLwesine.
Iimfihlakalo eziZukileyo zeRosari eNgcwele
Namhlanje, kuba kungoLwesithathu, sinomthandazo weeMfihlakalo eziZukileyo zeRosari yethu eNgcwele. Funda ngenyameko nyathelo ngalinye ekufuneka uliphumezile kwesi sivakalisi.
Kufuneka siqale ngokuthandaza kwezi zinto zilandelayo:
«Ngophawu lomnqamlezo ongcwele,
sihlangule, Nkosi yethu.
Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen ".
Ndiyazivuma phambi koThixo naphambi kwenu bazalwana,
Ndonile kakhulu kwiingcinga, amazwi nezenzo.
Ngenxa yam, ngenxa yam.
Ndiyathandaza kuMariya oyiNgcwele, kuzo zonke iingelosi kunye nabangcwele,
Ngamana bangandithandazela phambi kweNkosi yethu uThixo. Amen ".
Ke, kunyanzelekile ukuba sithandaze iGloria ukuze siqhubeke nayo.
Imfihlelo yokuqala ezukileyo: Uvuko lukaYesu
Bathe bakusondela engcwabeni likaYesu bemzisela amavumba abemlungiselele wona, baqonda ukuba ilitye lawo lisusiwe endaweni yokungena, bakuqaphela ukuba umzimba kaYesu awufumaneki ndawo. Kanye ngalo mzuzu kwavela amadoda amabini abonakala ngathi zizinto zokukhanya, abathe kwezi zilandelayo kubo: «Kutheni nifuna phakathi kwabafileyo nje ukuba ngubani ophilayo? UYesu Krestu uvukile ».
Qaphela: Kubalulekile ukuthatha ikhefu kancinci ekupheleni kwebali ngalinye leeMfihlakalo, kuba ngale ndlela sinokubonisa ngayo. Ekupheleni kwekhefu, funda u-Bawo wethu, ishumi (10) Yibonge uMarys kwaye uvale ngo-Gloria.
Imfihlelo yesiBini ezukileyo: Ukunyuka kukaYesu ezulwini
Emva kokuba uYesu evusiwe, wenyukela ezulwini kwaye uhleli ngasekunene kukaThixo uSomandla uYise. Cinga ngemfihlakalo kwaye uthi uBawo Wethu, ishumi (10) Dumisa uMariya kwaye uvale ngeGloria.
Imfihlakalo yesithathu ezukileyo: Ukufika koMoya oyiNgcwele
Bonke babehlanganisene, ngequbuliso beva ingxolo evela ezulwini kwaye ngalo mzuzu kanye, babona ukuvuthuza komoya kwaye ngamnye wabo babekhona wehla ngolwimi olwalukhangeleka ngathi ngumlilo. Wonke umntu wayegcwele nje nguMoya oyiNgcwele. Cinga ngemfihlakalo kwaye uthi uBawo wethu, ooShumi Babulisa ooMariya kwaye uvale ngeGloria
Imfihlakalo yesine ezukileyo: Ukunyuswa kweNtombikazi enguMariya ezulwini
Wonke umntu uya kundibiza njengoyolo, uThixo wenze imisebenzi emikhulu kum.
Yiba nomfanekiso-ngqondweni omncinci kwaye usebenzise eli thuba lokuthetha neNtombikazi kaMariya ngayo, nabani na okuthandazelayo kuThixo, kwiNkosi yethu. Thandaza uBawo wethu, ishumi (10) Yibonge uMarys kwaye uvale ngeGloria.
Imfihlakalo yesihlanu ezukileyo: Intombikazi enguMariya isithsaba ukumkanikazi kwindalo yonke
Ezulwini kwavela umqondiso omkhulu, apho umfazi wayenxibe ilanga wayebonwa, phantsi kweenyawo zakhe wayebona la luna entlokweni yakhe isithsaba esineenkwenkwezi ezilishumi elinambini.
Ingxoxo noThixo, uYesu Krestu kunye neNtombikazi enguMariya. Emva kwexesha wenza uBawo Wethu, ishumi (10) Isichotho sikaMarys kwaye avale ngeGloria.
Imithandazo yokufikelela kuvuthondaba
Imithandazo ebonisiweyo ukuqukumbela ukuphindwaphindwa kweeMfihlakalo eziZukileyo zeRosari eNgcwele zezi:
Kukuthini ukusetyenziswa kokuthandaza kwiRosari?
Ngokukodwa ngeRosari eNgcwele, sinokukhumbula ubomi iNkosi yethu uYesu Krestu eyabudlulayo, ukongeza kunina, iNtombikazi enguMariya. Kananjalo, oku kuyasinceda ukuba sibonakalise, kuba siya kuba nakho ukungena nzulu ebomini babo kwaye siqonde ukuba kukho uThixo olungileyo, onothando nonenceba; Okulungeleyo ukunikela ngobomi bakhe ngenxa yethu sonke singamazi nokumazi, osithandayo ngaphandle kwazo zonke izinto ezimbi okanye izono esinokuthi sizenze, osixolelayo asinike inceba yakhe enkulu, nangona esazi ukuba siza kububuyisela yenza.
NgeRosari sinokuzibeka kubudlelane obupheleleyo kunye nokuvisisana noThixo, njengombulelo: usuku olunye ngakumbi lobomi, ngokusinika impilo, ngokusivumela ukuba sibe nophahla lokuhlala kulo, usapho olusikhathaleleyo nolusikhathaleleyo ngathi, ngokuba nento yokutya, ukusikhusela nokuba nathi maxa onke, ukugcina izinto ezimbi kude, ukugcina abantu abakhohlakeleyo, ukusigcina kude nezono nokusikhokelela ngakumbi kwintando yakhe engcwele.
Kananjalo ungathatha ixesha ukubuza impilo yabantu kuyo yonke into el mundo, ngakumbi lo mzuzu uyindinisa aphila kuwo onke amadoda, ukuze asigubungele ngengubo yakhe engcwele asigxothe izifo zehlabathi, ukuze aphilise abagulayo, akhusele oogqirha, abantwana, abantu abadala, abahlobo, usapho. nabamelwane. Mcele ukuba asikhusele ngalo lonke ixesha, asinike amandla ayimfuneko okumelana nalo mzuzu, asinike ubulumko bokujongana namaxesha anzima kwaye ngaphezu kwako konke ukusivumela ukuba sihlale sizolile, ngoxolo nathi kunye nabo basingqongileyo, masize kunye kwaye sinike omnye nomnye isandla sobubele nesinyanisekileyo.
Kutheni ndifanele ndithandaze iRosari?
Akunyanzelekanga ukuba sithandaze iRosari, kodwa kulungile ukuyenza, kuba, ukongeza koku sele kuchaziwe, singagxila kokulungileyo nokubi, kuyo yonke into ayifunayo uThixo kuthi ukuze sikwazi ukuyiphumeza hayi phulukana nonxibelelwano naye, nokuba ngumzuzu okanye imeko, soloko umgcina engqondweni kuba kuphela kosindiso emhlabeni. Ndwendwela nawe IChaplet yeNceba kaThixo igqityiwe.